I-Dandruff isifo esifanelekileyo se-scalp, yintsholongwane yesikhumba. Inkqubo ye-cell peeling iyaqhelekanga kwaye ayikho into engavamile. Nangona kunjalo, ukuba inani leetyeli ezifakwe kwintloko likhula ngokungenammiselo, liqala ukudala uxhalaba kwaye libonisa ukuba kukho iingxaki nge-scalp. Isizathu esiyinhloko sokubonakala kwe-dandruff yinto yokusebenza kakubi, okubandakanya ukuphazamiseka ekusebenzeni kweengqungquthela ezihlambulukileyo, okanye ukuphazamiseka komjikelezo wesikhumba. Indlela yokuphilisa i-dandruff?
Ukunyanga ngokuthe ngqo kuxhomekeke kwizizathu zokutsala.
Ngokuqhelekileyo imbangela yokutshatyalaliswa kwephulo kukuphulwa kwe-PH-balance of scalp. Oku kwenzeka xa utshintsha i-shampoo okanye ukuvezwa kwesikhumba seekhemikhali, xa udweba iinwele okanye ukuvumela. Ngalo mphumo, i-fungus iyaqhubeka, ibe negalelo ekuqhubekeni kweentambo kunye nokubetha. Ukunciphisa imiphumo yemiphumo emibi yalezi zinto, kunele ukuletha ukulinganisela kwe-pH kwilizwe eliqhelekileyo, usebenzisa i-shampoos yezokwelapha.
Ngokuqhelekileyo, ukubonakala kweentambo zikhokelela ekunqongopheni kwamavithamini: B, B1, B2, B6, kunye namavithamini: I-D, no-E Kule meko, inxalenye yokwenza kakubi ukutyhulwa kwe-scalp ayiyi kusebenzisa kuphela i-shampoos kunye nokulungiselela amalungiselelo, kodwa ithabatha amavithamini ala maqela.
Xa isalathisi sebaceous siphukile, i-seborrhea enesibhakabhaka okanye eyomileyo iyabonakala. Esi sisifo esibi kakhulu esibangela ukuba isikhumba singagxininisi kuphela entloko, kodwa nakwindawo yeshiya, emva kweendlebe. Isizathu se-seborrhea sinokungaphumeleli kwe-hormonal okanye ukuphulwa komsebenzi wesondlo sesisu. Ukulahla i-dandruff kule meko akunakwenzeka ngaphandle kokunyangwa kwezempilo.
Ziziphi ii-shampoos ezikhuselayo ezinokuthi ndizisebenzise?
Namhlanje, ishishini lezokhemisi linalo lonke i-arsenal ye-shampoos yokulwa nesifo. Ezi zihlunu zikwahlula kwiiklasi ezi-2: i-shampoos ze-cosmetic kunye namayeza. I-shampoos yezokwelapha inokwakheka kwamalungu amaninzi afanelekileyo ekulwa nokutshatyalaliswa kwemida kwaye ingaba nemiphumo eyahlukileyo ngokupheleleyo, ngoko ke, ngaphambi kokuba uyisebenzise, ​​kubalulekile ukubonisana neengcali. Ziyintoni i-shampoos zonyango?
Ukubonelela ngesiphulo sokulwa ne-antibacterial, kwi-shampoos yongeza i-tar, isulfure, isepha.
Ukumisela imeko ye-microflora yesikhumba entloko, i-shampoos zokwelapha zisebenzisa i-antifungal kunye ne-antibacterial substances: i-ketoconazole, i-climbazole, i-pyrithione ye-zinc, i-clotrimazole.
Ukucocwa kancinci kwesikhumba kunye nokutshatyalaliswa kweeseli ezifile kukhuthazwa ngokufanelekileyo ngedayisi ye-salicylic.
Ukuze unyango luphumelele, kuyimfuneko ukuba ufunde imiyalelo kwi-shampoo yezokwelapha.
Unyango lwezonyango zabantu.
Unyango olwenziwa ngamanyathelo omntu lunokwenzeka ukuba loo nto ayinakunyuswa.
Ukuxhamla kwekhamile kunye neengqondi kudla ukusetyenziswa xa unyango lwe-dandruff. Yisebenzise ngamanqanaba alandelayo: enye ipofile yezityalo izothululwa kwi-200 ml. amanzi abilayo kwaye ushiye ukunika ihafu yesure. Ukufunyanwa kwamanzi kusetshenziselwa ukuhlambuluka intloko emva kokuhlamba, emva kokuyisebenzisa kufuneka kuhlanjululwe.
Isetshenziselwa ukulwa ne-dandruff kunye ne-whey. Wahluthwa elukhukweni ekhanda lakhe waza washiya iyure, wayifaka intloko yakhe nge-polyethylene. Emva kwexesha elichaziweyo, i-mask iyahlanjululwa kwaye ikhanda liyahlanjululwa. I-whey whey ingathatyathwa ngotshisi okanye i-yogurt.
Enye indlela - i-decoction of nettles and root roots of calamus: 1 isipuni se-first and 2 tablespoons yesibini. Umxube kufuneka uzaliswe ngeglasi yamanzi kwaye ubiliswe imizuzu engama-15 ukuya kobushushu obuphantsi. Emva kokuba umhluzi sele ucolile, kufuneka ucaciswe. Isicelo singenakwenzeka imihla ngemihla de kube yimpembelelo.
Xa unyanga kunye nezilwanyana zabantu, kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuphumelela kwabo kuncinci kakhulu kunezonyango zonyango, inkqubo yonyango inokuhlala ixesha elide. Ngoko ke, ngaphambi kokuba ukhethe isisombululo esithile sokulwa ne-dandruff, nangayiphi na imeko, kucetyiswa ukuba udibane neengcali.
Ihlabathi lemilingo leoli leoli
Izilwanyana zamandulo ze-neurodermatitis
Iikhoyi zeeops kunye nomphumo wayo kumzimba
Ibhushi ebomvu: iimpawu zonyango kunye nesicelo kwiyeza zamanani
Iibhola zebantwana ezinwele ezinde
Ukuba umntwana akayithobeli into enokuyenza?
I-sauna efanelekileyo kwimpilo yabantu
Kutheni sifuna abantwana?
Ukuhamba nomntwana: iingcebiso ezifanelekileyo
Impembelelo yokukhupha isisu kwi-psyche yowesifazane